ပင်မစာမျက်နှာ United Kingdom ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးကစားသမားများ ဒန်နီ Drinkwater ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB အကောင်းဆုံးအမည်ဝှက်ခြင်းဖြင့်လူသိများနေတဲ့ဘောလုံး Genius တစ်ဦးအပြည့်အဝဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိတင်ဆက်; '' သောက် ''။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒန်နီ Drinkwater ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ရက်စွဲကိုမရောက်မှီတိုင်အောင်သူ၏ကလေးဘဝအချိန်ကနေသင်တို့ကိုမှတ်သားလောက်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ပြည့်ဝ၏အကောင့်တတ်၏။ analysis ကျော်ကြားမှု, မိသားစုဘဝနှင့်သူ့ကိုအကြောင်းကိုအများအပြားနည်းနည်းသိအချက်အလက်များရှေ့တော်၌မိမိဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝငျသညျ။
ဟုတ်ပါတယ်, လူတိုင်းကသူ့စွမ်းရည်အောင်ကစားပေမယ့်မှသာအနည်းငယ်ပရိသတ်တွေအကြောင်းကိုသိတယ်ကွင်းအပြင်ဘက်တွင်သူ၏အသက်တာကိုအတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါသည်သူ့မိဘ, အစ်ကို, အစ်မများနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့စတာတွေအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူကပါဝင်ပတ်သက်သည့်ဒန်နီ Drinkwater အတ္ထုပ္ပတ္တိဇာတ်လမ်းစဉ်းစား။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ်ခွင့်ပန်ပြီးမှမရှိဘဲစတင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒန်နီ Drinkwater ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်: ဘ0အစပိုင်း
ဒံယလေကနို Drinkwater မတ်လ,5၏ 1990th နေ့၌ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ သူမိဘများက Mr နှင့် Mrs Drinkwater နေဖြင့်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နိုငျငံတျော၌မွေးဖွားခဲ့သည်။
ဒန်နီ သာ. ကွီးမွတျမန်ချက်စတာမှာမိမိငယ်စဉ်ကလေးဘဝနေခဲ့ရသည်။ သူကအနည်းငယ်ဆိအဖြစ်ယူနိုက်တက်ပရိတ်သတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ4၏နူးညံ့သောအသက်အရွယ်မှာဘောလုံးကစားစတင်ခဲ့သည်။ မိမိအတိုးတက်မှုနှုန်းသိသာဖြစ်လာသည်နှင့်သူ့ကိုလေးလည်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အကယ်ဒမီမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူ, ဆဲတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒန်နီ Drinkwater ပုံပြင်
ကိုယျတျောသ, သူယူနိုက်တက်အောက်မှာတစ်ဦးပထမဦးဆုံးအဖွဲ့ကပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုဖန်ဆင်းဘယ်တော့မှ အဲလက်စ်ဖာဂူဆန်.
သူဟာဘာစီလိုနာဖို့ 2009 ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲရှုံးမတိုင်မီ Hull မှာနောက်ဆုံးပရီးမီးယားလိဂ်ဂိမ်းတစ်ခုအသုံးမပြုတဲ့အစားထိုးခဲ့ပါတယ်။
သူဟာဇန်နဝါရီလ 2012 အတွက် Leicester များအတွက်လက်မှတ်မထိုးခင် Huddersfield, Watford, ကာဒစ်ဖ်နှင့် Barnsley နောက်တော်သို့လိုက်မှာချေးငွေကရှင်းလင်းပြောပြယူခဲ့ပါတယ်။ ကြွင်းသောအရာ, သူတို့ပြောသကဲ့သို့, သမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒန်နီ Drinkwater ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်: မိမိအသက္ကရာဇ်အကြောင်း
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. Drinkwater နှုတ်ကပတ်တော်ကို '' သောက်စရာ 'နဲ့' ရေ '' ကနေလာပါတယ်။ ဒါဟာခဲ့ 1066 အေဒီအတွက်အမည်သစ်ကိုရသောဘီယာမတတ်နိုင်နိုင်ခြင်းနေသောလူမျိုးအားပေးရလတစ်အမည်ပြောင်ပထမဦးဆုံး Cheshire ၌တွေ့
အဆိုအရ AncestryUK "အလယ်ခေတ်အားနည်း ale ခုနှစ်တွင်ဆင်းရဲတဲ့အတန်းတို့တွင်စကြဝဠာအဖျော်ယမကာကြီးနှင့်ရေကိုယ်တိုင်ကသာ doubtfully အနေအထိုင်ခဲ့သော်လည်း, ရေကဲ့သို့သောက်ခံရဖို့သကဲ့သို့စျေးပေါ။ အဆိုပါအမညျဖြစ်ကောင်းစွပ်စွဲနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဘီယာမတတ်နိုင်လိုတဲ့ pauper သို့မဟုတ် Miserables အားပေးပြီးမှတစ်ဦးနောက်နေအမည်ပြောင်ခဲ့, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦး innkeeper တစ်ခုသို့မဟုတ်မှတ်သားဖွယ်ရာ tippler မှအမြီးအမောက်၌ပေးသောခဲ့ကြပေမည်။ "
ဒန်နီ Drinkwater ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်: အလွန်လူမှုမီဒီယာမှာချစ်မြတ်နိုးမှုကို
မိမိအအမည်သစ်ကိုရသော Leicester မှာမိမိအချိန်ကာလအတွင်းရေပန်းစားဖြစ်လာခဲ့သည်ကတည်းက Unsurprisingly, လူမှုရေးမီဒီယာအရူးသွားပါပြီ။ အချိုရည်စဉ်အတွင်းစပါးဆန့်ကျင် Leicester ရဲ့အိမျဂိမ်းချိုး, Drinkwater သောက်ရေပုံခံခဲ့ရ. ဤသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာတခုတခုအပေါ်မှာဒေါသကိုမြင်တော်မူ၏။
ဒန်နီ Drinkwater အချက်အလက်
ဒန်နီ Drinkwater, Leicester တစ်ချိန်ကအနိုင်ရထားပါတယ် '' ရေငတ်မှဖြေရှင်းချက် '' Leicester မှာမိမိအချိန်ကာလအတွင်းဆုချီးမြှင့်။
ဒန်နီ Drinkwater ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်: ပရိသတ်များအကြိုက်ဆုံး
Drinkwater ချယ်လ်ဆီးမှာပရိသတ်တွေ '' အကြိုက်ဆုံးဖြစ်လာသည်။ Stamford Bridge ကိုလှည့်ပတ်ကိုပဲ့သောသီချင်းဤကဲ့သို့သောဝင်:
"ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာသင်တို့ဆီသို့ဒန်နီ Drinkwater ရဲ့ချယ်လ်ဆီး oh oh woah oh, သင်သိကြလိမ့်မည်ထက်ပိုချစ်သောသူ" ။
အဆိုပါ DRINKWATER သံစဉ် Hacking ကို။
ဒန်နီ Drinkwater ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်: အဆိုပါချဲလ်ဆီးအိပ်မက် Living
Drinkwater သူ 31st သြဂုတ်လ 2017 လွှဲပြောင်းနောက်ဆုံးနေ့နေ့၌ဆေးပညာဖြတ်သန်းပြီးနောက်ချယ်လ်ဆီးမှာအခွင့်အလမ်း relishing ကပြောပါတယ်။
သူကဆက်ပြောသည်: '' ငါကချယ်လ်ဆီးကစားသမားဖြစ်ဝမ်းသာမိပါတယ်နှင့်စတင်ရန်မစောင့်နိုင်ပါ။ ဒီမှာရနေတဲ့ခရီးရှည်ခဲ့ပေမယ့်အရမ်းဝမ်းသာတယ်နှင့်ကလပ်ပိုပြီးဆုဖလားအနိုင်ရကူညီပေးနေမျှော်လင့်နေပါတယ်။ ''
သူကပုံမှန်အားဖြင့်ယဉ်ကျေးမှုသွားတာ technique ကိုအတူတိုက်ခိုက်အင်္ဂလိပ်ကွင်းလယ်လူကြောင့်ချယ်လ်ဆီးသူ့ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ သူလည်း၎င်းတို့၏ကွင်းလယ် options များခိုင်မာစေဖို့လိုအပျခဲ့သညျ။ အတူ A ကောင်းဆုံးပေါင်းစပ် Bakayoko.
ဒန်နီ Drinkwater ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်: သူတို့ကသူ့ကိုအကြောင်းကိုပြောပါအဘယျသို့
"သူကအလွန်ကောင်းသောကစားသမားပါပဲ။ အကွက်လေးထောငျ့ကှကျနှင့်အလွန်ကောင်းစွာကာကွယ်။ သူမအရာအားလုံးကိုအလွန်ကောင်းလှ၏။ ချယ်လ်ဆီးကသူ့ကိုလိုအပ်တယ်လိုလျှင်, "အဆင်သင့်ဖွင့် - Claudio Ranieri, သြဂုတ်လ, 2017 ။
"ဘာသူပြုသောအမှုဖွင့်လူတိုင်းဖို့တော်တော်ထင်ရှားခဲ့သည်။ သူဟာစိတ်ကူးရာသီရှိခြင်းရဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တစ်စိတ်ကူးရာသီခဲ့ပေမယ့်ပင်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျွန်တော်သူ့ကိုသတိထားမိခဲ့ကြပါတယ်။ လယ်ပြင်၏ဧရိယာ၌ယှဉ်ပြိုင်အတော်လေးပြင်းစွာသောအပင်ဖြစ်သည်, သို့သော်ဤအတွက်သူ့ကိုဆောင်ကြဉ်းသူ Leicester နှင့်အတူအောင်မြင်ထားပြီးဘောလုံးကွင်း၏အရည်အသွေးမျိုးပွားနိုင်လျှင်ကြည့်ဖို့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ "- ရွိုင်း Hodgson, 17 မတ်လ 2016 ။
ဒန်နီ Drinkwater ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်: Bakayoko အဘယ်သူမျှမကြောက်လို့ကျင်းပ
ချယ်လ်ဆီးကွင်းလယ်ကစားသမား Tiemoue Bakayoko သူဒန်နီ Drinkwater ကအန္တရာယ်တတ်နိုင်သမျှယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းအခိုင်အမာသိရသည်။
"ဒန်နီ Drinkwater, ငါ့ကိုတွှေပါဘူး" အဆိုပါပြင်သစ်ကိုပြောသည် SFR အားကစား. "ဒါဟာပြိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာငါတိုင်းအဖွဲ့သည်ကြောင်းလိုအပ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်။ ဒါဟာသင်တိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်။ "
ချယ်လ်ဆီးလေးလည်းခြင်းဖြင့်၎င်းတို့၏ကွင်းလယ်ကိုခိုင်ခံ့စေဖို့စိတ်အားထက်သန်ဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည် Bakayoko နှင့် Drinkwater နီမန် MATIC ၏ထွက်ခွာအောက်ပါ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရန်။
Harry Kingsley ဇွန် 22, 2020 မှာ 4: 39 ည
Andros Townsend ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်